Mashaqada Codbaahiyaha Xilliyada Salaadda | Doodwadaag waa Danwadaag.
Mashaqada Codbaahiyaha Xilliyada Salaadda
Mashaqada Codbaahiyaha (Maykaroofanka) ama aalada mikrafoonka loo yaqaan ma jirin waqtigii rasuulka scw,sidaa darteed kolka ay muslimiinta doonayaan in ay is ogaysiiyaan in uu galay waqtigii salaadda waxaa rasuulka scw faray ninka adimaya in uu fuulo meel sare oo uu adimo si ay u maqlaan inta ku xeeran masaajidka oo dabeeto u soo xaadiraan salaadda,
Waqti aan ka fogayn qarnigii tagay markii la helay macrafoonka ama codbaahiyaha muslimiinta meel kasta oo ay joogaan waxay inta badan masaajidadii ku xireen makarafoono si ay u sahlanaato is ogaysiinta galidda waqtiyada salaadda,taas oo runtii fududeysay ogaanshaha inuu galay waqtigii salaada oo u qof kasta ku helayo gurigiisa ama goobtiisa shaqada,khaasatan wadamada muslimiintu dagan yihiin ama u badan yihiin,arintaas oo dhabtii noqotay mid lagu diirsaday oo dadka muslimka ah anfacday.
Waxaa la yiri nimco kasta nusqaankeeda lehe sida dad badanu qabaan waxaa makrafoonadii ka soo noqday dhibaatooyin ay dadka qaar dareemaan kolka muddo dheer ay masaajidadu isticmaalaan codbaahiyayaasha dibadda u furan kuwaas oo aan lagu ekaysiin waqtiyada aadaanka iyo aqimaadda ee lagu idleeyo salaadaha oo dhan khaasatan kuwa jahriga ah ee labada ragco ee hore ee la jideeyay in lala jahro oo codka kor loogu qaado,
Taasi oo keenta in codbaahiyaha salaadda lagu tukanayo uu haysto aag dhan muddo aan ka yarayn 20 ilaa 30 daqiiqo shan goor maalin kasta,sowdkaasi oo aan ku ekeyn kuwa goobta ku tukanaya oo kaliya ee ay ku khasban yihiin inay maqlaan dad goobta ka fog ee aan xitaa makrafoonkaasi la tukan karin ama aan raaci karin imaamka tujinaya waaba haddii ay salaad galaane,waxaa kale oo ku khasban inay maqlaan codkaas dad aan tukaneynin,sida dumar caado qaba ama umul ah,iyo caruur yar yar oon gaarin xiligii kala garashada ama dad xanuunsan oo cusbitaalka ku jira oo ay dhici karto in ay siyaabo kale salaadda oga ansaxdo,iyo mararka qaar hadii ay goobtaasi muslimiinta kula nool yihiin dad aan muslimba ahayn.
Waxaa kaloo dhacda xiliyada qaar in makrafoonku sii shidnaado salaadaha ka dib muddo saacad ama ka badan ah iyada oo lagu akhrinayo darsi ama muxaadaro,tiiyoo ay dhacdo in makrafoonada qaar samada lagu tolo iyada oo uu ku wacdinayo imaam ama sheekh aad u cod dheer,taas oo xiliyada qaar xitaa saamixi wayda inay saani isu maqlaan dad ku sheekaysanaya dibadda masaajidda ama meel in door ah ka durugsan masaajidada uu darsiga ka socdo.
Akhristow sidaan hore u soo sheegay mikarafoonku kama mid aha diinta ee wax gadaal ka yimi oo loo isticmaalo fufudeyn ah gaarsiin cibaado,khasabna maaha in la adeegsado wax ka baxsan waqtiyada aadaanka ama loo adeegsado goob ka baxsan goobta lagu tukanayo ama laysku wacdinayo.
Waxaa dhacda marar badan in makarafoonada dibada u shidan waqtiyada ka baxsan aadaanka ay ku dhibaatoodaan dad badan oo aan iyaga ahayn kuwo uu quseeyo markaa salaada ama wacdiga ka socda masjidkan uu mikarafoonkiisu gilgilayo goobo aad oga durugsan halka uu ku yaallo.
Matalan maxaa ka galay mikarafoonkan dadka xanuunsanaya ee ku jira cusbitalka ay dhici karto inuu masaajidkan jaar dhow la yahay!!!!
Maxaa ka galay mikarafoonkan haweenta cudurdaarka leh ee aan xiliyadaas tukaneynin ee ay dhici karto inay ka seexan weydo xiliyo ay nasan lahayd!!.
Maxaa ka galay mikarafoonkan cunuga yar ee sabiga ah ee ay dhici karto inuu hurdada ka salalo oo dib u seexan waayo mudada uu ka dul dhawaaqayo!!.
Maxaa ka galay mikarafoonkan waayeelka cutushka ah ee sariirta ku aruuray ee ay siyaabo kale salaadda oga ansaxaysay!!!!
Maxaa ka galay mikarafoonkan masaafurka aan lagu lahayn inuu jamaaco ku tukado ee ruqsada u haystay inuu salaad uu soo gaabiyay ama jamciyay uu hoteelkiisa ku tukado!!.
Maxaa ka galay mikarafoonka gaalka ay dhici karto inuu degan yahay guri la deris ah masaajidka oo ay ahayd in loo dhimriyo oo uu ka dheehdo wanaaga islaamka ficilada muslimiinta!!!.
Rasuulka scw waxa uu yiri:-
“لا ضرر ولا ضراراً”
“Dhib ma jiro is dhibna ma jiro”
Walaalayaal islaamkeenu wuxuu ina faray inaan ka fogaano dhibaato nooc kasta oo ay tahayba,khaasatan islaamku waxa uu cibaado oo dhan ka dheereeyay inay noqoto mid aan lagu dhibaatoon.
Rasuulka scw waxa uu nin asxaabtiisa ka mid ah ku canaantay inuu salaadda ku dheereeyay dad uu tujinayay oo waxa uu ku yiri ma waxa aad rabtaa in aad fidmo wale noqoto!!
Ilaahay sareeye e waxa uu muslimiinta ugu baaqay in ay codka hoos u dhigaan waqtiyada digriga iyo wardiga oo alle waxa uu yiri:-
“وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ”
“Ka xus rabigaa naftaada dhexdeeda adiga oo khushuuc iyo cabsi ku dheehan codkana aan sare u qaadeynin subixii iyo galabtii”
“وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً)
“Ha la jahrin salaadaada oo codka sare ha u qaadin aadna hoos ha ugu dhigin ee ka yeel codkaada mid dhex dhexaad ah”.
Aayadaas waxay soo degtay xili ay gaaladii qureysh dhibsadeen rasuulka scw salaadiisa oo ay xitaa isku dayeen in ay ku dhibaateeyaan,markaasaa ilaahay faray rasuulka scw inuu sidaa u tukado.
“وفي صحيح السلم ان رسول صلي الله عليه وسلم قال:- ( أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا ، إنكم تدعون سميعا قريبا ، وهو معكم )
“Dadyahow naftiina u dhimriya oo codka hoos u dhiga,waayo idinku ma baryeysaan Alle dhagool ah iyo mid idinka maqan ee waxaad baryeysaan Alle maqal badan oo idiin dhow oo idinla jira”.
Ugu dambeyntii walaalayaal waxaan awoodnaa in aan makarafoonada dibada ee masaajideena ku xiran u adeegsano aadaanka oo kaliya waqtiyada aan tukaneynana aan ka xerno samaacadaha dibadda oon u furno kuwa gudaha oo kaliya oo waliba gaabsan,waayo samaacadaha gudaha qudhooda haddii la dheereeyo waxaa jira dad badan oo uu dhagahoodu dhibayo codbaahiya loo adeegsado sida leestaanimada ah ee aan masuuliyada ku dheehneyn”.
Haddii ay inagu adkaato inaan sidaa yeelno micrafoonadeena waqtiyada salaadaha oo dhan bal aan isku dayno inaan dhibteena ka daysano dadka hurda een jamaacada ku waajibin waqtiyada cishaha iyo fajarka.
Sh Cabdulaahi Maxamed Xuseen